Fashilka Xukuumada Dr. Gaas iyo Mustaqbalka Puntland | Puntlandnow.com
Anagoo ku hadlayna magaca iyo maqaamka Golaha Difaaca Puntland waxaanu hore usoo saarnay qoraalo (30/05/2014, 08/06/2014, 06/12/2014) waxayna ahaayeen dhamaan qoraalo ka tarjumaya xaalado iyo khataro kusoo wajahan deegaanada Puntland ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Mar kasta ujeedkeenu wuxuu yahay ilaalinta danta dadka iyo dalka Puntland.
Arrimo badan oo aan hore uga dignay ayaa soo ifbaxay bilihii lasoo dhaafay waxana ka mid ah khalkhal gelinta amniga, dhaqaalaha iyo siyaasad aan lahayn qadiyad iyo jiho.
Dhacdooyinkii ugu dambeeyey waxaa ka mid ah:
Guriga uu magalada Bossaso ka degan yahay Taliye ku xigeenka Booliska Puntland Gen. Muxiyadin Muse Axmed waxaa soo weeraray (07/02/2015) kooxo hubaysan oo wata gawaari uu leeyahay nin ganacsade ah oo la heyb ah Madaxweynaha Puntland Dr. C/weli Gaas. Booliska Puntland waxay sheegeen in gawaarida lagu weeraray taliyaha ay leeyihiin ganacsato (DAAWO warbixintii booliska).
Arrintaas foosha xun waxaa ku dhintay sadax qof oo uu ku jiro askari ka tirsanaa ilaalada taliyaha. Dhacdadaas waxaa kasii xun in la sii daaye dhamaan dagaalyahanadii soo weeraray Gen. Muxiyadin maalmo gudahood.
Gen. Muxiyadin oo ka soo baxay Bossaso soona aaday Garowe (16/02/2015) si uu uga dacwoodo Madaxweynaha Puntland sii daynta dambiileyaasha ayaa Madaxtoyada Puntland oo ku jirta xaalad fashil ah waxaa ka soo baxday Dikreeto xilka looga qaadayo Taliyaha hey’ada amniga PIA Cabdi Xasan.
Isku aadinta xil ka qaadista Cabdi Xasan iyo safarka Gen. Muxiyadin waxba isagama xirna laakin waxa la tuhunsan yahay in la isku aadiyay labadaas arrin si loo dhaho “Reer Hebel baa hortaagain Dowlada” iyadoo qiil loogu raadinayo fashilka Xukumada Dr. Gaas.
Sidoo kale Madaxweynaha Puntland wuxuu xabsiga kasoo daaye (15/12/2014) si aan sharciga waafaqsanayn labo sarkaal (Cabdirizaq Xuseen Tahliil ‘Ilkacase’ iyo Maxamad Nuux Adan ‘Abu Xafsa’) oo lagu qabtay walxaha qarxa iyagoo jooga magaalada Galkacyo Nofembar 2012. Sababta, sharciga iyo nidaamka lagu soo daaye labadaas eedaysane lama sheegin iyadoo ay xabsiyada Puntland ku xiran yihiin in ka badan 400-qof.
Dowlada Puntland wali ma bixiso mushaar joogto ah arrintaasna waxay kaliftay gadoodka ciidamo kala duwan dhawr jeer, sida Booliska iyo Darawiishta.
Miisaaniyada Puntland waxay gaartay $40million sanadkii, laakin xaalada mushaar la’aanta waxay maraysaa 10-bilood (Dr. Gaas wuxu xukunka haya ku dhawaad 14-bilood).
Kharashaad badan ayaa ku baxa safarro, xaflado iyo qaabkii hore looga tagay oo ceebta ahaa “FADLANTA”.
Xukumada Dr. Gaas ilaa iyo haatan masoo jeedin qorshe dhaqaale laakin mas’uuliyinta ayaa ku mashquulsan sidii ay dalka u keeni lahaayeen makiinado daabaca lacagta Faalsada ah arrintaasna waxay khatar ku tahay guud ahaan dhaqaalaha iyo hantida shacabka Puntland.
Madaxweynaha Puntland wuxuu ku eedeeyey xukuumadii hore ee Dr. Faroole inay ka tagtay $40million oo deyn ah (DAAWO waraysigii Dr. Gaas ee 11/05/2014 – daqiiqada 18:50),
halka Madaxweyne ku xigeenka C/xakim Camey uu sheegay in Xukuumadii hore ay ka tagtay $14million oo deyn ah (DAAWO waraysiga Madaxweyne ku xigeenka, daqiiqada 07:00).
Labada masuul (Madaxweyne Gaas iyo Madaxweyne ku xigeen Camey) midkee baa shacabka u sheegaya RUNTA?) Dhanka kale, Wasiirkii hore Maaliyada Puntland Farax Cali Shire wuxuu sheegay in xukuumadii Dr. Faroole ay wareejisay $1.1million oo deyn ah (DAAWO waraysiga Farax 07/01/2015, daqiiqada 04:00)
Madaxweyne Gaas wuxuu sheegay isagoo jooga London (25/10/2014) in Puntland laga dhiso doono sadax madaar (airports) muddo dhan 2-sanno gudahood, arrintaas oo siday macquul ku tahay aan caddayn iyadoo dhismaha madaarka Bossaso uu weli ku jiro cago-jiid (DAAWO khudbadii Dr. Gaas ee London, daqiiqada 1:11)
Madaxweyne Gaas wuxu balanqaaday shirweyne Reer Puntland ay uga wadatashadaan arrimaha dalka isago waraysi (11/05/2014) ku sheegay in “kama dambayn Bisha June 2014” la qaban doono shirkaas (DAAWO waraysiga, daqiiqada 19:00).
Sidaan ognahay shir noocaas ah ma qabsoomin, qorshe lagu qabanayana ma muuqdo waxaana la tuhunsan yahay in xukuumada aysan rabin talooyinka iyo dhaliilaha shacabka Puntland.
Kor waxaana ku xusnay dhawr arrin oo iftiiminaya fashilka Xukuumada Gaas iyo welwelka mustaqbalka Puntland. Todobaadyadii la soo dhaafay waxa jira weeraro joogto ah oo ka socda buuraha Galgala iyo kooxda Shabaab oo weeraro ka fulisa magaalooyinka Puntland sida Bossaso iyo Galkayo.
Dhanka arrimaha Federaalka, Madaxweyne Gaas safarkii uu ku aaday Muqdisho (04/02/2015) waxa la tuhunsan yahay inuu heshiis hoose lasoo galay Madaxweynaha Federaalk Xasan Sh. Maxamud heshiiskaas oo ku saabsan inuu Gaas taageero qorshaha Xasan ee muddo-kordhinta ka hor xilliga doorashada 2016-ka.
Sida aan kor ku xusnay, Xukuumada Dr. Gaas waxay ku fashilantay siyaasada gudaha sida amniga, dhaqaalaha iyo nidaamka xisbiyada, sidoo kale waxay ku fashilantay la xisaabtanka Dowlada Federaalka.
Waxaa intaa dheer in Madaxweynaha Puntland iyo Madaxweyne ku xigeenka Puntland ay shacabka u sheegeen arrin aan macquul ahayn (farqiga u dhaxeeya $40million iyo $14million) taasna waxay shaki galinaysaa in shacabku aamino madaxda Puntland.
Hadaba, Golaha Difaaca Puntland wuxu si guud ugu baaqaya shacabka Puntland inay ilaashadaan midnimada, nabada iyo dowladnimada.
Sidoo kale Goluhu wuxuu shacabka ugu baaqayaa inay isha ku hayaan dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee Xukuumada Dr. Gaas ee gudaha Puntland sida iska horkeenida shacabka iyo beelaha Puntland, iyo siyaasada Federaalka oo sida la tuhunsan yahay Dr. Gaas uu u wado qaab aan waafaqsanayn qadiyadda Reer Puntland ee soocelinta qaranimada Soomaaliya.
Waxaanu ILAAHAY ka baryaynaa nabad, cadaalad, midnimo iyo horumarka Puntland iyo guud ahaan dalka Soomaaliya.
Golaha Difaaca Puntland